ဗန်ဒါဘတ် ဘာလို့မကစားရသေးတာလဲဆိုတာ BT Sport News မှာ ဟားဂရေ့စ် ရှင်းပြ – FBV SPORT NEWS
ဗန်ဒါဘတ် ဘာလို့မကစားရသေးတာလဲဆိုတာ BT Sport News မှာ ဟားဂရေ့စ် ရှင်းပြ
October 28, 2020 By admin Sports News
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွေ့မှာ ပေါငးသန်း ၄၀ အသုံးပြုပြီး အေဂျက်စ်အသင်းကနေ ဗန်ဒါဘတ်အားခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်…သိုပေမဲ့ နည်းပြ ဆိုးရှားလ် ဟာ ယင်းကစားသမားကို အသုံးပြုခြင်း များများစားစားမရှိသေးတဲ့အကြောင်း ကို အိုဝင်ဟားဂရေစ့် က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်….
ဟားဂရေ့စ်ကတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် မှာ အိုလေဆိုးရှားလ် နဲ့ တော်တော်လေးရင်းနှီးမှု ရှိတဲ့အပြင် အပြင်မှာ တွေ့ဆုံသွားလာနေသူဖြစ်ပြီး အနီးကပ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလို့ရပါတယ်….
ဟားဂရေစ်က ” ဆိုးရှားလ်က ဗန်ဒါဘတ် ကိုဘာဖြစ်လို့ မသုံးလဲဆိုတာလေးကို ပြောချင်ပါတယ် …အခု သူဟာ ဖာဂူဆန်ပြီးနောက် လက်ရှိ Line up ထုတ်တဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံး နည်းပြလို့ပြောလို့ရနေပါတယ်…..
နောက်ပြီးတော့ သူ့က ခန့်မှန်းရလွယ်တဲ့လူတယောက် …အနေအေးတယ် ပြီးတော့ အမြဲတမ်းပြုံးနေပြီးတော့ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရမှာမကြောက်တဲ့နည်းပြ တယောက်ပါ….ကစားသမားဘ၀မှာတည်းက အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးတွေ အကွက်မြင်မှုတွေကို သူက ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားပါ….
Monday က ကျနော်သူ့ကိုဖုန်းဆက်မေးခဲ့မိတယ် ဗန်ဒါဘတ်ကို သုံးသင့်ပြီ ကစားသမားအတွက် သူ့နေရာမရှိဘူးထင်မယ်လို့ စိတ်ခံစားမှုဝင်သွားမယ် သူ့ခြေစွမ်းကျသွားနိုင်တယ် လို့ ကျနော်က စိုးရိမ်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်…ဆိုးရှားလ်က ပြန်ပြောခဲ့တယ်….သူ့နဲ့ အံဝင်မယ့်နေရာတော်တော်ကို စဉ်းစားရခက်တယ် ပြီးတော့ သူ့လည်းကွင်းလယ်မှာ တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါလို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ် လို့ ဟားဂရေစ့် က BT Sport News မှာ ဆိုးရှားလ် နဲ့ဖုန်းပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်…